ပြည့်စုံ: October 2007
Pyae Sone | 10:26 AM | poem
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့… … …
တောင်တန်းတွေကသာ သူတို့ကို ပင်လယ်က
မင်းခိုက်စိုးစံ( သုည ၀တ္တုမှ)
ပခုက္ကူသံဃာတော်များက မေတ္တာပို့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲကို ပြန်လည်စတင်ပြီ
Pyae Sone | 1:52 AM | သတင်း
ပခုက္ကူမြို့က သံဃာတော်အပါး(၂၀၀)ခန့်ဟာ ဒီနေ့မနက် (၈)နာရီခွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတလျှောက် ပေါက်လမ်းမကြီးအတိုင်း မြို့ကိုပတ်ပြီး ကြွချီမေတ္တာပို့သပါတယ်။
အရှေ့ဆုံးတန်းကသံဃာတော်များက သာသနာ့အလံ(၃)ခုကိုကိုင်ဆောင်ထားပြီး ကျန်သံဃာတော်များက (၃)ပါးတတန်း စီတန်းပြီး မေတ္တာသုတ်ကို ရွတ်ဆိုကြွချီကြပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်များနဲ့ ပြည်သူလူထုကို စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းမှာ စစ်အစိုးရအာဏာ ပိုင်တွေက အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် တလနီးပါး ငြိမ်သက်သွားပြီးနောက် ဒီကနေ့မနက်မပိုင်းမှာ ပခုက္ကူသံဃာများက မေတ္တာပို့ကြွချီလမ်းလျှောက်ပွဲကို ပြန်လည်စတင်လိုက်တာဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားညီလာခံကို ထောက်ခံပြီးသံဃာတော်များဆန္ဒပြမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ပွဲကို ပခုက္ကူအာဏာပိုင်တွေက အတင်းအဓမ္မကျင်းပခဲ့တဲ့အတွက် ဒါကို တန်ပြန်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ သံဃာတော်များက အခုလိုမေတ္တာပို့ကြွချီတာ ဖြစ်ပါသည်။
ညီလာခံထောက်ခံပွဲကို လုပ်ခွင့်ပေးရင် သံဃာထုကိုလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်စီတန်းကြွချီမေတ္တာပို့ခွင့် ပြုရမယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေကို သံဃာတော်များက ကြိုတင်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါ တယ်။
အာဏာပိုင်တွေက အမျိုးသားညီလာခံထောက်ခံပွဲအတွက် ပြည်သူလူထုကို အဓမ္မဆင့်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ တက်ရောက်သူကို ကျပ်(၁၅၀၀)ပေးပြီး မတက်ရောက်ရင် ကျပ်(၃၀၀၀)ပြန်ပေးရမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့အကြောင်း ဒေသခံပြည်သူတွေက ပြောပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အမျိုးသားညီလာခံထောက်ခံပွဲ မနက်(၈)နာရီမှာ အဆုံးသတ်ပြီးနောက် တစ်နာရီခန့် အကြာမှာ ပခုက္ကူသံဃာတော်တွေက စီတန်းကြွချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန် - 1:52 AM
စစ်တွေ ကျောင်းသားများက ကာတွန်း ပိုစတာများ ရေးဆွဲ၍ နအဖကို တိုက်ခိုက်
Pyae Sone | 8:00 PM | News
အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ညတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ကျောင်းသားများက စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်သည့်ကာတွန်းများတွင် နအဖ စစ်သားများက ရဟန်းတော်များအား သတ်ဖြတ် နေပုံများအား ရေးဆွဲထားပြီး ပုံများအောက်တွင် “ဗုဒံ္ဓ သရဏံ - - - ဒိုင်းဒိုင်း” “ ဓမ္မံသရဏံ- - - ဒိုင်းဒိုင်း” “သံဃံ သရဏံ -- ဒိုင်းဒိုင်း” ဟူသော စာများအား ကာတွန်းပိုစတာများအား ဘုရားကြီး အနီးတ၀ိုက်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ အ၀င်ဝ လမ်းများနှင့် နံရံများတွင် ချိတ်ဆွဲ ထားခဲ့ကြပါသည်။
နအဖ အာဏာပိုင်များက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နောက်ထပ် ဆန္ဒပြပွဲများကို ပေါ်ပေါက်လာမည်ကို သိရှိနေသဖြင့် အဓိဂရုဏ်းနှိမ်နှင်းရေး သင်တန်းများ၊ စွမ်းအားရှင် သင်တန်းများအား ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့အပြားတွင် ပြုလုပ်နေပြီး စစ်ရေး သင်တန်းများ ပို့ချပေးနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Pyae Sone | 9:43 AM | poem | ကဗျာ
ဒီမို ဂါထာ ၃ ပုဒ်
ဂါထာဤ ၃ ပုဒ် ။
အချိန် - 9:43 AM
Pyae Sone | 7:44 AM | News
အာရှတလွှား အမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသူ တစ်ဦးဖြစ်သော ဘိန်းဘုရင်ခွန်ဆာသည် ရန်ကုန်မြို့၊ သုဝဏ္ဏမြို့သစ်ရှိ၎င်းနေအိမ်တွင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။ အသက်(၇၄)နှစ် အရွယ်ဘိန်းဘုရင်သည် သွေးတိုးရောဂါခံစားနေခဲ့ရသည် ဟုသတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်သူသည်နှစ်ပေါင်း(၃၀)ကျော်ကြာ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီး အစိုးရတော်လှန်ပုန်ကန်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် လက်နက်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလဲလှယ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံက အလိုရှိကာ ဖမ်းမိလျှင်ဆုငွေဒေါ်လာနှစ် သန်းပေးမည် ဟုထုတ်ပြန်ထားခံရ သော်လည်း မြန်မာစစ်အစိုး၏ အကာအကွယ်ဖြင့်ရန်ကုန်တွင်ကွယ်လွန်ချိန် အထိ နေထိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
အချိန် - 7:44 AM
Pyae Sone | 6:59 AM | Statement
မြန်မာပြည်သားများခင်ဗျား …. ….. …..
ကျနော်တို့ဟာဂျိုမပေါက်တာတခုကလွဲလို့ အသိမဲ့စွာနွံထဲမှာခြေထောက်နစ်ပြီး ရုံးကန်နေရတဲ့နွားတွေပါပဲ။ အစိုးရ အမည်ခံ နအဖဟာ ကျနော်တို့ကို ကြိမ်တို့။နံပါတ်တုတ်ပြ သေနတ်တွေနဲ့ခြိမ်းချောက်ပြီး သူတို့အသိုင်းအဝိုင်း ကတော့ ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ ဘဏ္ဌာတွေနဲ့လောကစည်းစိမ်အပြည့်အဝစံစားမှီဝဲနေတယ်။ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေမှာတနေ့စာ ဆန်တပြည် ဖိုးရအောင် မနည်းရှာနေရတဲ့အချိန်မှာ သူတို့အသိုင်းအဝိုင်းက မြေမနင်းသားတွေလုပ်ပြီး ယစ်မူးနေကြတာကို အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက် သယံဇာတပေါကြွယ်ဝတဲ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ငတ်နေသူ တွေဒုက္ခရောက်နေသူတွေမရှိသင့်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ရှိနေပါတယ်။ ဟိုအရင်က မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ မွေးဖွားးချိန်မှသေဆုံးချိန်ထိ တန်ဖိုးရှိရှိနေနိုင် သေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ ကျနော်တို့ရဲ့မျက်စိ တွေကိုပိတ်။ အသိဥာဏ်ဗဟုသုတတွေကို တားဆီး အမြင်မကျယ်တဲ့မျက်ကန်း ဘဝတွေနဲ့ရှင် သန်နေကြရတယ်။ ဘယ်မှာလဲကျနော်တုိ့ရဲ့တိုးတက်မှုတွေငါတို့ရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာတွေ ခေါင်းအေးအေးထားပြီးစဉ်းစားကြပါ။ကျနော်တို့ ဟာ ဒီလောက်ပဲသိ။ဒီ
လောက်ပဲစား။ဒီလိုမျိုးပဲသေသွားရမှာလား။ကျနော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကို ကျနော်တို့လိုပဲ အဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားဆိုပြီး ထားခဲ့ကြမှာလား။ညီလာခံဆိုတာဘာလဲ ဘယ်သူ့အတွက်လုပ်နေတာလဲ။ ကျနော်တို့လူထုအတွက် မဟုတ်တဲ့ ညီလာခံထောက်ခံပွဲတွေဟာ ကလေးတွေရိုက်တဲ့ ဂေါ်လီဝိုင်းလောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါ့မလား။ (MRTV-TO-MWD)ကလွှင့်တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်အုံး အပေါ်ယံပဲကောင်းတယ်။တကယ်တမ်းအတွင်းမှာတော့ပုတ်ပွနံဟောင် နေတာအား လုံးအသိပါ။အရင်ကမြန်မာဟာ သာယာလှပပြီးကမ္ဘာအဆင့်မြင့်နေရာမှာရှိခဲ့တယ်။ခု ဘယ်နေ ရာမှာရှိနေပြီလဲ။အရင်လိုကမ္ဘာအဆင့်မြင့်ဆုံးနေရာတွေမှာဆက်လက်လူတန်းစေ့နေနိုင်ဖို့ခင်ဗျားတို့ကျနော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ သိပြီးရောပေါ့နော်။ကျနော်တို့လဲသာမာန်လူတန်းစားပါပဲ သို့သော်နေနိုင်စားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ဟာမြန်မာလူမျိုး ကျနော်တို့ချစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတရပ်လုံးအတွက်နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မျိုးဆက်အားလုံး အတွက် အမှန်တရားကိုဖေါ်ထုတ်ပြီးအဖမ်းဆီးအနှိပ်စက်ခံပြီးသေသွားမယ်ဆိုတာတောင်မှနောင် ဒီနိုင်ငံမှာကျန်ခဲ့မဲ့ သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖြစ်ကျန်ခဲ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။လူတန်းစေ့အခွင့်အရေးရရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်စေရမယ်။ဒါကြောင့် နအဖ အလိုကျနေထိုင်ပြီးသေမှာလားနဖါးကြိုးဆွဲ ကြိမ်တို့ခံပြီးနေမှာလား။ တန်ဖိုးရှိတဲ့မြန်မာ တယောက်အနေနဲ့(သို့)လူထုအတွက်နောင်မျိုးဆက်အတွက် မြေသြဇာအဖြစ်ခံပြီး သေမှာလား ……… … …….စဉ်းစားပါ… ……… …….ဆုံးဖြတ်ပါ …… …… …… နောက်မကျသေးပါဘူး … … ……. ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို
နအဖကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားပါ ……. ။
( အ ကောင်း ဆုံး မြေ သြ ဇာ)
အချိန် - 6:59 AM
ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သော စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှု တစိတ်တဒေသ ….အပိုင်း (၂)
Pyae Sone | 4:51 AM | ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်
(၂၅)ရက်နေ့ထိ ချီတက်ရာလမ်းကြောင်းတွင် တစုံတရာနှောက်ယှက်မှုမရှိသော်လည်း (၂၆) ရက်နေ့ (၁၁း၃၀) ခန့်တွင် ကြေးသွန်းဘုရား ရှေ့တွင် သပိတ် စခန်းဖွင့်စောင့်နေကြသော သံဃာတော်များ။ကျောင်းသားများ။ လူထုများ ကြားထဲသို့ တရုပ်နုိင်ငံမှလာဘ်ထိုးထားသော (Faw)ကားကြီး(၆)စီးနှင့်စစ်သားများ၊ လုံထိန်းများ၊ဒိုင်နာလိုင်းကား(၃)စီးနှင့်နအဖ၏ လက်ကိုင်ဒုတ်(ကြံ့ဖွတ်-စွမ်းအားရှင်များ)မီးသတ်ကားအသေး(၂)စီးတို့ဟာ ယာယီသပိတ်စခန်းထဲသို့ တရကြမ်းမောင်း ဝင် ရိုက်နှက်လူစုခွဲခိုင်းခြင်း၊သံဃာတော်နှင့်လူထုတချို့အား ပိတ်ထား ခြင်းများပြုလုပ်နေမှု၊အပေါ်စည်းအပြင်ရှိလူထုများမှ၎င်းတို့အား ဖွင့်ခိုင်းခြင်းကြိမ်းမောင်းခြင်းမျိုးစုံဖြင့် ဖိအားပေးနေခြင်းအပေါ် စစ်အာဏာရှင်ငရဲမကြောက်သူများမှ တဆင့် တိုးပစ်ခတ်ခြင်း။မျက်ရည်ယိုဗုံးခွဲခြင်းဖြင့်ထပ်မံပြုလုပ်လာသဖြင့် သံဃာတပ်ပေါင်းစု၊ ကျောင်းသား၊လူထုသည် ဗဟန်း (၃)လမ်း၊ကြားတောရလမ်း၊ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊အသီးသီးအဖွဲ.ကွဲထွက်ပြီး(၁)နာရီတွင် စတင်လမ်းလျောက်ဆန္ဒပြမည် ဆိုသော်လည်း နအဖ မိစ္တာတွေ၏အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်အသီးသီး ကွဲထွက်လာသည့်အင်အားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျောက် ဆန္ဒပြမေတ္တာပို့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုထွက်ခဲ့တဲ့ ချီတက်ရာလမ်းတလျောက်မှာလည်း ငယ်ငယ်ကစိမ်ပြေး တမ်း ကစားသလိုပဲလိုက်လံနှောက်ယှက် ပိတ်ဆို့မှုများတောက်လျောက်လုပ်လာပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာမေတ္တာပို့ ဆန္ဒပြနေတဲ့တပ်ပေါင်းစုမှာ လက်နက်ဆိုလို့အပ်တိုတချောင်းတောင်မရှိသော်လဲ လိုက်လံနှောက်ယှက်နေတဲ့ဘုရား တည်၊ ကျောင်းဆောက်နေတဲ့ ဘုရားတကာတွေရဲ့လက်ကိုင်ဒုတ် တပည့်ကျော်တွေရဲ့လက်တွေထဲမှာတော့ အသေး ဆုံးနံပါတ်ဒုတ်နဲ့အကြီးဆုံး(40 နဲ.M-16)တွဲထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့လစ်ရင်လစ်သလိုချောင်တဲ့နေရာမှာအပျောက် ရိုက်ဖြိုခွင်းဖို့လိုက်လံနှောက်ယှက်ပိတ်ဆိုမှုတွေလုပ်သော်လဲ သံဃာတပ်ပေါင်းစုချီတက်ရာလမ်းတလျောက်မှာ လူထု ပါဝင်လာခြင်း။ဆရာတော်များကံဆောင်ခြင်းအပေါ် ဝမ်းသာမျက်ရည်ဆို့ခြင်း၊နအဖအကြမ်းဖက်ခြင်းအပေါ်မေတ္တာပျက် ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ဆို့ခြင်းများဖြင့် အားပေးဆုတောင်းမှုများရှိခဲ့ခြင်းများဖြင့် ကံဆောင်သံဃာတော်များ။ ကျောင်း သားများ။ NLD လူငယ်များနှင့်လူထုအတွက် အားဖြစ်ပေါ်လျက် ဆက်လက်ချီတက်ဆန္ဒပြ မေတ္တာပို.ခဲ့ကြပါတယ်။။
((( စာကြွင်း - ချီတက်ရာ လမ်းတလျောက်တွင် သံဃာတော်များမှမေတ္တာပို့ခြင်း။ NLDလူငယ်များနှင့်ကျောင်းသား လူငယ်များမှသံဃာတော်များ၏လုံခြုံရေးအတွက် လက်ခြင်းချိတ်ပြီးဘေးဘယ်ညာ ကာရံပေးထားခြင်း။ ဘာသာပေါင်းစုံ ပါဝင်သောလူထုမှ သံဃာတော်များ လူထုအတွက် နအဖ ကို မေတ္တာပို့အမျှဝေခြင်းအပေါ်နအဖ မှအကြမ်းဖက်သည့် အတွက်သံဃာတော်များနှင့်ဆန္ဒပြပြည်သူလူထုကြီးတို့ ဘုရားခြေတော်ရင်းတွေမှာ သွေးမြေကျကုန်ပါပြီ။ သံဃာတော် များကိုလက်အုပ်ချီပူဇော်ပေးပါ။အားပေးပါ။ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါဟုလမ်းတလျောက် ကြွေးကြော်ကြပါတယ် )))
အချိန် - 4:51 AM
Pyae Sone | 1:35 AM | News | သတင်း
Burma best-known comedian, Zarganar, was rearrested by Burmese authorities at his home on Monday evening, according to sources. A friend of the comedian told The Irrawaddy on Tuesday no charge had been leveled by the authorities, who said they wanted Zarganar for questioning. The authorities gave no indication of how long he would be held, the source said.
It’s suspected that Zarganar is again in trouble with the authorities for visiting monasteries following his release from his last stay in Insein prison on October 17. He had been arrested on September 25 for giving food and water to protesting monks during the September demonstrations.
အချိန် - 1:35 AM
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သော သံဃာနှစ်ပါး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက်
Pyae Sone | 10:48 PM | သတင်း
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအတွင်း ပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့သူ ရခိုင်သံဃာတော် နှစ်ပါးသည် စစ်အာဏာပိုင်များ၏ လိုက်လံ ဖမ်းဆီးခြင်းမှ လွတ်ကင်းစေရန်အတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံသို့ ခက်ခဲစွာ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနောက် ယနေ့တွင် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ရတနာလမ်းမှနေ၍ ရာဇဂြိုလ် စာသင်တိုက်တွင် အလိုတော်ပြည့် ဓမ္မစာရိယ တက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်ကြားနေရင်း ရန်ကုန်မှ ရွှေဝါရောင်ဆန္ဒပြပွဲတွင် ၅ ရက်တိုင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ဦးအိန္ဒ ပညာ (သက်တော် ၂၆ နှစ်) နှင့် ဦးမာဂိန္ဒ (သက်တော် ၂၁ နှစ်) တို့အနက် ဦးအိန္ဒပညာကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းထား သည်များကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး။ ။ဦးဇင်းတို့ ဘယ်နေ့တုန်းက ထွက်ခဲ့တာလဲဘုရား။
ဖြေ။ ။အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်က ထွက်လာတာ။ လမ်းမှာ နည်းနည်းတော့ ဦးဇင်းတို့ကို စစ်တာ ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လျောလျောရှူရှူတော့ ရောက်ပါတယ်။
မေး။ ။လမ်းမှာ ဘယ်လို လာခဲ့ရပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ ရဲအောင်လံ ကားကို စီးပြီးတော့ တောင်ကုတ်ကနေ ဒကာတဦးရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျကို သွားမဲ့ဘုတ်ကို မှောင်ခိုနဲ့ လာခဲ့ရတာပါ။
မေး။ ။လမ်းမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ တွေ့ခဲ့လဲ။
ဖြေ။ ။တောင်ကုတ်မှာတော့ စစ်တယ်။ လမ်းမှာလည်း တည်းမယ့် ဘုန်းကြီးကျောင်း မရှိဘူး။ သိပ်ချောင်ချောင်ချိချိ မရှိတော့ တည်းခို ရိပ်သာမှာ အိပ်ရတာပေါ့။ ရဲသားတွေက ၃ ခါတောင် လာစစ်တယ်။ ဘာမှတော့ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခက်အခဲ တွေ့တာကတော့ ထုံးစံတိုင်းပေါ့။ ဟိုတုန်းကတော့လို သိပ်မချောင်တော့ဘူးပေါ့။ ဆန္ဒပြတာတွေ ကြားထား တဲ့ အခါကျတော့ သိပ် မလွတ်လပ်တော့ဘူးလေ။
မေး။ ။ ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ဦးဇင်းတို့က ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တာလဲဘုရား။
ဖြေ။ ။စက်တင်လာလ ၁၉ ရက်နေ့က စပြီးတော့ ဥပုသ်နေ့ပေါ့နော် စပါဝင်ခဲ့တာ။ ၂၆ ရက်နေ့ထိ ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့။
မေး။ ။ဆန္ဒပြပွဲမှာ ဦးဆောင်ပြီး ပါဝင်ခဲ့တာလား။
ဖြေ။ ။ဦးဆောင်ပြီးတော့ ပါဝင်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့တိုင်းလိုလိုတော့ ပါဝင်ခဲ့တယ်။
မေး။ ။ဦးဇင်းတို့ ကျောင်းကို အာဏာပိုင်တွေက လာဖမ်းတာလား။
ဖြေ။ ။လာဖမ်းမယ်လို့တော့ ကြားနေတာ။ လာလည်း လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကလည်း ကြည့်နေတာပေါ့။ စစ်ကားတွေနဲ့ လာဖမ်းတဲ့ အခါကျတော့ ဦးဇင်းတို့က ထွက်ပြေး နေတာပေါ့။
မေး။ ။ပြည်တွင်းက ဆန္ဒပြပွဲတွေ အပေါ်မှာ ဦးဇင်းတို့ ဘယ်လို သုံးသပ်မိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ပြည်တွင်းက ဆန္ဒပြတာတွေကတော့ ထူးခြားမှုတော့ ရှိမှာပါ။ လူတွေလည်း တော်တော်လေး နစ်နာခဲ့ကြ တာပေါ့။ ပြည်တွင်းမှာလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာဆို ဘုန်းကြီးတွေ တော်တော်များများ မရှိကြတော့ဘူးလေ။ ဘုန်းကြီးတို့ ကျောင်းက သံဃာအပါး ၈ဝ ကျော်ဆိုရင် အခု မရှိသလောက် ဖြစ်ကုန်ပြီ၊ တပါးမှ ရှိကြတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ စတေးရလိုက်တယ် ဆိုပါတော့။ ငြိမ်းချမ်းလာမယ်လို့ ယုံကြည် မိပါတယ်။
မေး။ ။ဦးဇင်းတို့ အခု ဘယ်လို ဆက်လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားလဲ ဘုရား။
ဖြေ။ ။ဦးဇင်းတို့ကတော့ ပြည်တွင်းမှာ နေရတာ သိပ်လည်း အဆင်မပြေဘူး။ နအဖ စစ်အစိုးရကိုလည်း မုန်းတီး ရွံ့ရှာနေတဲ့ အခါကျတော့၊ ဒီကို ထွက်လာလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ကူညီမဲ့ လူတွေလည်း ရှိကြတယ်။ လောလောဆယ် တော့ ဘာတွေ လုပ်ရမယ် ဆိုတာတော့ မစဉ်းစားမိသေးပါဘူး။
မေး။ ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဦးဇင်း အနေနဲ့ ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲရှင်။
ဖြေ။ ။အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူကိုချစ်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ ချစ်ဖို့ ဆိုတာကလည်း ပြည်သူ အားကိုးလောက်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ အားကိုးလောက်တဲ့ အရည်အချင်း မရှိရင်တော့ ပြည်သူလူထုတွေက ဆက်လက် တော်လှန်နေ မှာပါပဲ။ နှောင့်ယှက် နေမှာပဲ။ ဦးဇင်းတို့လည်း ဆွမ်း လုံလုံလောက်လောက် မရတော့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဒီဒုက္ခတွေကို ဦးဇင်းတို့က မခံနိုင်တော့လို့ အခုလို သပိတ်မှောက်တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ပြောချင်တာကတော့ နအဖ စစ်အစိုးရကို ဆက်လက်ပြီး သပိတ် မှောက်ကြပါ။ အလေးအနက် လုပ်မယ်ဆိုရင် ပဓါန စာမေးပွဲတွေကို သံဃာတော်တွေ မဖြေကြဖို့ ပြောချင်တယ်။ ဒါဟာ စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက်ရာ ရောက်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
(စက်တင်ဘာလ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး အပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ သံဃာ အပါး ၃ဝ ရောက်ရှိလာပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ပထမ ၄ ပါး၊ ဒုတိယ ၁၁ ပါး၊ တတိယ ၁၂ ပါးနှင့် စတုတ္ထ ၁ ပါး ပေါင်း ၂၈ ပါး ပြန်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ရွှေဝါရောင် လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွားရောက်၍ ပညာသင်နေသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံသား သံဃာတော်များ ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အာဏာပိုင်များမှ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဒေသ အသီးသီးမှ ပြန်လည် ပို့ဆောင် လိုက်သဖြင့် နေရပ်ရင်းသို့ ပြန်လည် ကြွချီလာကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ရောက်ရှိလာသည့် ရဟန်းပျို သံဃာနှစ်ပါး သည် ရန်ကုန် လှုပ်ရှားမှု အတွင်း ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက် ဖမ်းဆီးမခံရရန် ထွက်ပြေး ခိုလှုံလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခု သံဃာတော်များကို ကော့စ်ဘာဇာ အခြေစိုက် မြန်မာ အတိုက်အခံ အင်အားစု (ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံ) Opposition Force of Burma (Bangladesh) မှ တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက် ကူညီထားကြောင်း သိရသည်။)
အချိန် - 10:48 PM
Pyae Sone | 10:47 AM | News
“၀” အမျိုးးသားအဖွဲ့ချူပ် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ တာ့မဟာဆန်း သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ နခွန်းဖင်း ဆေးရုံတွင် ၂၈ရက်နေ့ည သန်းခေါင်ကျော်အချိန်တွင် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန် ချိန်တွင် အသက် ၆၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။
ဈာပန အခန်းအနားကို ယခုလတွင် တရုတ်ထုံးစံအရ မြေမြုပ်ခြင်း မပြုလုပ်သောကြောင့် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဟု သမီးဖြစ်သူကပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ ချင်းမိုင် ထောင်ကြီးမှတဆင့် နခွန်းဖင်း ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ သည်။
ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူ နန်းကြာနုနှင့် သားသမီး လေးဦး ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
တာ့မဟာဆန်းသည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ပန်ဆန်းမြို့မြောက်ဘက် ၀ိန်းငင်းမြို့၌ မွေးဖွားပြီး စော်ဘွား အဖ တာ့ဖောင်းနှင့် အမိ နန်းလူ တို့၏ သားဦးဖြစ်သည်။
တာ့မဟာဆန်းသည် လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်(၂၀)ခန့်မှစ၍ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင် အခြေစိုက်၍ “၀” ပြည်လွတ်
မြောက်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ် ခန့်မှစ၍ အဆုတ်နှင့် လေပြွန်ယောင် ရောဂါကို စတင်ခံစားခဲ့ရသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ အသက်ရှူကြပ်သော ရောဂါကြောင့် မကြာခဏ အောက်ဆီဂျင်ပေးနေရသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် တာ့မဟာဆန်းအား ဘိန်းဘုရင် ဝေရှောက်ခမ်နှင့် ဆက်နွယ်နေမှု၊ မက်သာအက်ဖက်တမင်း စိတ်ကြွဆေးပြား သန်းနှင့်ချီ၍ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မှောင်ခို တင်သွင်းမှုတို့ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင်ဆောင် တရားရုံးက ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ၄င်း၏နေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ အ ကျဉ်းထောင်တွင် ကွယ်လွန်ချိန်အထိ အကျဉ်းကျခံနေရသည်။
တာ့မဟာဆန်း ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်း “၀”အမျိုးသားတပ်မတော်ကို ဗိုလ်မှူးကြီး တာ့မိန်းမှ ဆက်လက် တာဝန်ယူထားသည်။
အချိန် - 10:47 AM
ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သော စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှု တစိတ်တဒေသ...အပိုင်း(၁)..
Pyae Sone | 5:14 AM | ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်
မြန်မာပြည်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလလှုပ်ရှားမှုတွင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောပြည်တွင်း မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့(လူငယ်)အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ကိုကျော်ကျော်၏ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှု နှင့်ရင်တွင်း ခံစားချက် ……
ကျနော်တို့မြန်မာနှိင်ငံမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့တလျောက်မှာ ဒီနအဖရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာတသက်လုံးဒီအတိုင်းကြီး အကြောက်တရားလွမ်းမိုးပြီးနေသွားလို့ မရတော့ဘူးလို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးလုပ်ဖြစ်တာက ဒီအကျင့်ပျက် အစိုးရကို ပယ်ချဖို.အတွက် လူထုအပေါ် ထာဝရနွေးထွေးမှုပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာကို
အရင်လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲတွေသင့်သူကိုတွေ။လိုအပ်တဲ့ပညာယူသင့်တာ ယူဆွေးနွေးသင့်တာ တွေဆွေးနွေးပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို အခိုင်အမာချလိုက်တယ်။ လူထုတရပ်လုံးနှင့်နောင်မျိုးဆက် အားလုံးအတွက်ရှေ့မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးမဲ့-အစတေးခံလူငယ်များနဲ့ သမိုင်းဝင်သာဓုကန်စေတီ (ရွှေပြည်သာမြို့သစ်)မှာ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာ ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး အောက်ပါအလုပ်တွေဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။။
(၉-၁-၂၀၀၅)ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ကျောင်းများမှလူငယ်များအားစည်းရုံးခြင်း။ ကျောဘက်တွင် (?) တံဆိပ်နှင့်ရှေ့ တွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်စာများရေးသားထားသော(T-shirt)များအခမဲ့ဖြန်.ဖြူးဝတ်စေခြင်း။ဘောပင်-သော့ချိတ်)များပြုလုပ် ဝေခြင်း။ နအဖ ဆန့်ကျင်စာများအား ကျောင်းဝင်းအတွင်းကပ်ခြင်း။မြို.နယ်များရှိရပ်ကွက်များအတွင်း ဖြန့်ဝေကျဲချခြင်း။
ဖက်တလမ်းကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် (နအဖ) မှလိုက်လံ စုံစမ်းဖမ်းဆီး ဖို့ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာသူတို့ဖမ်းဆီးတာကိုမခံပဲ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ထွက်လာခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ဆက်လက် တော်လှန်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းကျန်ရှိတဲ့ ဗကသ၊ (၈၈) နှင့်ကျန်အဖွဲ့အစည်းများ။ပြည်တွင်းရှိလူထုတရပ် လုံးအတွက် တက်နိုင်တဲ့ဘက်က ဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာ အသိပေးလိုက်ပါတယ်။။
စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှု တစိတ်တဒေသ … … …
(၂၄-၉-၂၀၀၇) - ရွှေတိဂုံအရှေ.ဘက်မုဒ်မှစတင် ထွက်ပြီးဗားကရာလမ်းအတိုင်း။ တဆင့် လှည်းတန်းလမ်းဆုံ မှတဆင့် ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံ။ တဆင့်ကျိုက်ဝိုင်း-ဘုရားလမ်း။ တဆင့်ကမ္ဘာအေးဘုရားရင်ပြင်တွင် သံဃာတပ်ပေါင်းစု ဆရာတော်များမှအထွေထွေ တရားများဟောကြားပြီးလမ်းခွဲ …..။
(၂၅-၉-၂၀၀၇) - ကြေးသွန်းဘုရားရှေ့တွင်သပိတ် စခန်းဖွင့်ပြီးယောက်လမ်းအတိုင်းချီတက်။ဆူးလေဘုရားရှေ့ တွင်သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများ ၊ အနုပညာရှင်များ မှ တရားဟောပြီး သိမ်ဖြူလမ်းအတိုင်း။ တဆင့်ပုဇွန် တောင်။ကျောက်မြောင်းတို.မှဖြတ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံလမ်း။ တဆင့်ကြေးသွန်းဘုရားရှေ့တွင် သံဃာတပ်ပေါင်းစု ဆရာတော်များမှအထွေထွေတရားများဟောကြားပြီးလမ်းခွဲ………။
(၂၆-၉-၂၀၀၇) - နေ.လည်(၁၁း၃၀)နာရီခန်.တွင်ကြေးသွန်းဘုရားရှေ.တွင်စုဝေးရောက်ရှိနေသောသံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများ နှင့်ပြည်သူလူထုအတွင်းသို့စစ်ကားများ။ လုံထိန်းကားများ။ နအဖလက်ကိုင်ဒုတ်(ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ
ခိုး၊ ဆိုး၊ နှိုက်)များဦးဆောင်ပြီး အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်၊ ဖမ်းဆီး၊ နှိပ်စက်၊ ပစ်ခတ်မှုများလူမဆန်စွာပြုလုပ်လာသဖြင့် ကြေးသွန်းဘုရားအနောက်ဖက်ရှိညောင်တုန်းကျောင်းတိုက်အတွင်း တွင် ဆရာတော်များစုစည်းပြီးအင်အား(၇၀၀၀)
ခန့်ဖြင့် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းအတိုင်းထွက်ခွါလာရာ (NLD) ရုံးတွင်းမှသံဃာတော်များနှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းပါဝင်ချီ တက်ဆန္ဒပြကြရာလမ်းတလျှောက်တွင်နအဖအာဏာမပိုင်များက မိမိတို.ကဲ့သို့.အကြမ်းဖက်ခံရပြီး ကွဲထွက်သွားသော
တပ်ပေါင်းစုများနှင့်မစုမိစေရန် လိုက်လံပြီးချီတက်ရာလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်းများဖြင့် လိုက်လံနှောက်ယှက်ခြင်း များပြုလုပ်နေသော်လည်းဘုရင့်နောင်လမ်း(ကန္နားလမ်း)ရှိ သခင်မြပန်းခြံရှေထိ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြရာဆူးလေဘက် တက်မည့် ဘက်မှပိတ်ဆို.ထားခြင်းခံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ချီတက်ရာလမ်းကြောင်းပြောင်းကာ ဘုရင့်နောင်ဘက်သို့ ထပ်မံချီတက်ခဲ့ပါတယ်။အလုံမြို့နယ်ဆင်မင်းဈေးနား အရောက်တွင်ရှေ့နောက်နှစ်ဘက်ညှပ်ပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့ခံရပါတယ်။ (၂)မိနစ်အတွင်းလူစုခွဲခိုင်းပြီးပစ်ခတ်။ရိုက်နှက်ခံရပါတယ်။နာရီဝက်ခန်.အကြာတွင်ဆင်မင်ဈေးဘက်မှာ နအဖအရာရှိမှ
(၂၇-၉-၂၀၀၇)-ကျိုက်ကဇံကွင်းအနီး အထက(၃)ကျောင်းအရှေ့တွင်ဆန္ဒပြကျောင်းသား၊ သံဃာ၊ လူထုအား ဖမ်းဆီး ပိတ်ဆို့ ထားသောစစ်တပ်လုံထိန်းနှင့် စွမ်းအားရှင်များအားပြန်လည်ပိတ်ဆို့ပြီးပြန်လွတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်း။ တိုင်ကီ များချပြီးတောချောက်မောင်းထုတ်သလိုထုခြင်းကမ္ဘာမကြေ သီဆိုခြင်းများပြုလုပ်နေချိန်တွင် ခွတ်ဒေါင်းအလံလွှင့်ထူပြီး
အင်အားဖြည့် လာရောက်ပူးပေါင်းသော ကျောင်းသားလူငယ်များ။ ကျောင်းကြိုရန် ရောက်ရှိနေသောကျောင်းသား မိဘများနှင့်လူထုအားတာမွေအဝိုင်းထိတ်မီးပွိုင့်ဘက်မှတရကြမ်းမောင်းဝင်တိုက်သတ်။ ပစ်ခတ် ၊ရိုက်နှက်၊ ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်ကာလူစုခွဲဖြိုခွင်းခဲ့သော်လည်း-ကန္နားလမ်းတလျောက်ဆန္ဒပြနေသောကျောင်းသား တပ်ပေါင်းစုနှင့်ထပ်မံ အင်အား ဖြည့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရာ ဆင်မလိုက်အဝေးပြေးဝင်းအနီးတွင်ထပ်မံပစ်ခတ်ဖြိုခွဲလူစုခွဲခြင်းခံရပြန်ပါသည်။
အချိန် - 5:14 AM
New York Times (IHT): Sober times for Myanmar’s comics - Choe Sang-Hun
Pyae Sone | 11:28 AM | News | သတင်း
“Oh, yes, we do, doctor,” says Par Par Lay. “But in Myanmar, we are not allowed to open our mouths.”
That’safavorite joke of Par Par Lay,athird-generation practitioner of a-nyeint pwe, the traditional Burmese vaudeville featuring puppets, music and slapstick comedy tinged with in-your-face political satire - all performed inacountry where cracking the wrong joke can land you in jail.
About midnight on Sept. 25, his relatives say, the police raided Par Par Lay’s home-cum-theater here and took him away. On the same day, at least one other popular comedian who, like Par Par Lay, had previously been imprisoned for his political jokes,aman named Zargana in Yangon, was arrested, according to Amnesty International and local residents.
The tightening of the ruling junta’s gag on dissident voices came as the regime conductedabloody crackdown on the first major pro-democracy uprising in this country in 19 years.
“I tried to find him, but I don’t know where he is,” said Par Par Lay’s wife, Ma Win Ma, 56,adancer. “If the past is an indication, he must have been beatenalot. I am worried about whether he is alive or not.”
The Mustache Brothers isafamily troupe of 13 comedians, dancers and musicians. Par Par Lay and his brother Lu Maw, 58, wear handlebar mustaches, hence the group’s name. They used to travel from village to village, performing at weddings, funerals and festivals.
In 1990, when the military government rejected the decisive victory of Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy in the country’s first election in 30 years and placed the pro-democracy leader under house arrest, Par Par Lay was thrown into jail for six months for his political humor.
In 1996, his troupe performed before an audience of 2,000 people, including foreign ambassadors, at the lakeside compound of Aung San Suu Kyi, by thenaNobel Peace laureate. In one skit, Par Par Lay demonstrateda“government dance,”acomic rendition ofawily public servant stealing money from the poor.
Even with Par Par Lay gone, his family has kept the theater going on Mandalay’s run-down a-nyeint street, which Lu Maw proudly likened to London’s West End and Broadway in New York.
The street looked deserted, with foreign tourism having been sharply curtailed since the crackdown. Creaking taxis and pedicabs maneuvered around potholes and stray dogs onasun-baked street. Lu Maw’s family waited for tourists who never came.
“We are artists: we believe in ordinary people, not in the government,” said Lu Maw in English. “We need light, but in Myanmar, light on and off. Not enough electricity. No water supply. School - money, money, money! Ordinary people no money.
“So we joke,” he said. “People needagood joke. But the government don’t like us because we joke.”
The Mustache Brothers are an unlikely tourist attraction inacountry where few people dare to criticize the government. But the government appears to tolerate the troupe’s spoofs as long as they performed only in English.
His rapid-fire English words seldom formacomplete sentence. In performances, he supplements them with gestures and sign boards. One sign read “KGB,” Lu Maw’s allusion to the secret police in Myanmar.
His street-side theater could barely accommodate 10 red plastic chairs. Marionettes hung againstawall. On display wasapicture of Aung San Suu Kyi visiting the Mustache Brothers in June 2002. Outside, Lu Maw’s nephews kept an eye out for the police.
Lu Maw said he believed that Par Par Lay was arrested because he wasa“good organizer” among the many a-nyeint comedians in Mandalay. He had strong opinions about the military generals who have mismanaged this resource-rich country into poverty, and joked about why Myanmar largely escaped the worst of the deadly 2004 tsunami:
A general died and becameabig fish, the joke goes. As the tsunami was rolling toward Myanmar, the fish came to the surface and told the wave: “Stop! I have already done that here.”
But Lu Maw said the recent killing of monks by soldiers was “no good for jokes.”
Lu Maw said that everyone in Myanmar was busy trying to keep up with rising prices, which is what drove people onto the streets to protest in August. He noted that Par Par Lay was sentenced in 1996 to “seven years for one joke” at Aung San Suu Kyi’s place. Now, thanks to inflation, Lu Maw cracked, you make “two jokes and get 100 years in prison.”
“We are dead meat already,” he said.
“We need their help again,” Lu Maw said. “Richard Gere’s support is especially important because he isaBuddhist. We needaRambo.”
Despite Lu Maw’s tireless optimism, his theater was permeated with sadness. In the past month, the family has struggled to make ends meet withadearth of foreign tourists. Mustache Brothers T-shirts are collecting dust. Older members of the family were lying listlessly onawooden bed on the mud-brick floor.
“If the government comes and takes his clothes and food, then I will know he is alive,” said Ma Win Ma, Par Par Lay’s wife. “That is enough. I believe one day he will come back and we can perform together again.”
“Maybe he is performing in prison somewhere,” Lu Maw said. “Yes, we are afraid. But we keep on going. We just joke. This is our job, our family tradition.”
အချိန် - 11:28 AM
Pyae Sone | 8:38 AM | သတင်း
လူထုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေအင်မတန်ဆိုးရွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ ကဝေဒနာရှင်တွေဟာ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ဖို့အတွက် ထိုင်းနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမယ်တော်ဆေးခန်းကို လာရောက်ကုသခံ နေကြရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းနယ်စပ်ကို ဖြတ်သန်းလာကြသူတွေဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ထွက်ပြေးလာ ခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေသာ မက ကျန်းမာရေးကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကို ဖြတ်၊ စစ်သားတွေကို လာဘ်ပေး၊ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ လမ်းတွေကိုဖြတ်သန်းပြီး ထိုင်းနယ်စပ်ကို လာရောက် ကြသူတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ရဲ့ ကုတင်(၁၂၀)ဆန့် မယ်တော်ဆေးခန်း ကိုလာရောက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ အခမဲ့ကုသပေးနေတာပါ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကဆိုရင် လူနာပေါင်း တစ်သိန်းကျော်လာရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့ကြပြီး အဲဒီလူနာတွေထဲက တ၀က်လောက်ဟာ နယ်စပ်အ နီးတ၀ိုက်မှာ နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီး ဆေးကုသဖို့သက်သက် ထိုင်းနယ်စပ်ကိုလာရောက်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသဖို့ အထွေထွေစရိတ်တွေ ကြီးမြင့်လှလို့ မတတ်နိုင်သူတွေ အသက်ဆုံးရှုံးမှုပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငှက်ဇျားရောဂါကြောင့် နှစ်စဉ်လူ သုံးထောင်သေးဆုံးနေကြောင်း အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ ၀မ်းကိုက် ၀မ်းလျှောရောဂါတွေကြောင့် လူတွေထောင်နဲ့ချီ သေကောင်ပေါင်းဖြစ်နေရကြောင်း၊ တီဘီရောဂါဆိုရင် နှစ်စဉ်ရောဂါရှင်အသစ်တသိန်းနီးပါးတွေ့နေရကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရံပုံငွေအဖွဲ့(ယူနီဆက်)ရဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရသိရှိရပါသည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို လျှို့ဝှက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Back Pack ကျန်းမာရေးလုပ်သား အဖွဲ့က ၀န်းထမ်တဦးကတော့ လူတွေမှာ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်ကြတော့ ဆေးရုံဆေးခန်းမသွားနိုင်ကြတော့ပဲ သေမဲ့ နေ့ကိုစောင့်နေကြကြောင်း အများစုကပြောနေတယ်လို့ဆိုပါသည်။
အချိန် - 8:38 AM
ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရေး မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီတိုက်တွန်း
Pyae Sone | 5:13 AM | News
မြန်မာစစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ကြားမှာ နောက်ထပ်တွေ့ဆုံမှုတွေတိုးပြီးလုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုသသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာအီဘရာဟင်ဂမ်ဘာရီ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကခန့်အပ်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေး ၀န်ကြီးအောင်ကြည်တို့ ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာ အခုလိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုဟာ ပထမအဆင့်ပဲရှိသေးကြောင်း၊ တိကျခိုင်မာတဲ့ ရလဒ်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အထိ တွေ့ဆုံသွားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံစဉ်အပြီး သတင်းထောက်တွေကို မစ္စတာဂမ်ဘာရီပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန် - 5:13 AM
Pyae Sone | 9:48 AM | News
ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ(၂၆)ရက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဟာ သံဃာတော် တွေဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြဖော်ထုတ်ပွဲကို စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် သံဃာတော်တွေသွေးမြေကျခဲ့ရတာ တလပြည့် တဲ့နေ့ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်နှင့်နိုင်ငံတကာတွင် အထိမ်းအမှတ်ဘုရားတက် မေတ္တာပို့သတာတွေပြုလုပ်ခဲ့သလို ဘာသာ ပေါင်းစုံမှလည်း ဆုတောင်းပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့၊ မဲတော်ဆေးခန်းတွင်လည်း ဒီကနေ့ ည(၇)နာရီတွင် မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက်ဆုတောင်းပွဲနှင့်အတူ နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော် (မည်သူမ ဆိုကိုယ်ကြိုက်တာအလကားစားသောက်နိုင် ပါသည်။) ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လူဦးရေ (၁၀၀၀)ကျော်တက်ရောက် ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးနောက် အခမ်း အနားသို့တက်ရောက်လာကြသော ဘာသာပေါင်းစုံလူထုများသည်မယ်တော်ဆေးခန်းလမ်းတလျှောက်ရှိ နိဗ္ဗာန်ဈေးစား သောက်ပွဲသို့လှည့်လည်ပြီးဝါသနာရှင်များကသူတ နှစ်သက်ရာ တေးသီချင်းများဖြင့်သီဆိုကြသည်။
အချိန် - 9:48 AM
Pyae Sone | 9:06 AM | News
ကိုသက် | အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇
စစ်အစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုကြောင့် လွန်ခဲ့သည့်လ ၂၆ ရက်နေ့က ရဟန်း သံဃာတော်များ၊ အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင် များနှင့် ကျောင်းသား၊ ပြည်သူများ ကျဆုံးခြင်း တလပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အန်အယ်လ်ဒီ လူငယ်ခေါင်းဆောင် မစုစုနွေးကဦးဆောင်၍ ရွှေတိဂုံဘုရား အနောက်ဖက်မုခ်၌ ယနေ့နံနက် ၆ နာရီကျော်တွင် အနီရောင်ပန်းခြင်းချကာ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Type rest of the post hereပန်းခြင်းချ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုကြသူများတွင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတဦးနှင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ ၂ ဦးလည်း ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၏ကိုယ်စား ကျဆုံးသွားသူများအတွက် လွမ်းသူ့ပန်းခြင်းကို ချရခြင်းဖြစ်သည်ဟု မစုစုနွေးက
“ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို စစ်အစိုးရလက်ကိုင်တုတ်တွေက အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့တာဟာ သာသနာ ညှိုးနွမ်း အောင်လုပ်တာ၊ ဒါကိုကျမတို့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ လက်မခံနိုင်လို့ သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရဲ့ ကံဆောင်သပိတ် မအောင်မြင်မချင်း မေတ္တာတရားကိုရှေ့ထားပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဆက်လက်တောင်းဆို သွားမယ်လို့ ကျမကတိသစ္စာ ပြုခဲ့ပါတယ်” ဟု မစုစုနွေးက ပြောသည်။
သံဃာတော်များနှင့် ကျောင်းသားပြည်သူများ အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရသည့် ရွှေတိဂုံဘုရားအရှေ့ဘက်မုခ်၌ လွန်းသူ့ပန်းခြင်းချရန် မူလကစီစဉ်ထားသော်လည်း ထိုနေရာတွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ တင်းကျပ်စွာ ချထားသောကြောင့် ဘုရား အနောက်ဘက်မုခ်တွင်ချရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မစုစုနွေးက ပြောသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုခ်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည့် သံဃာတော်များနှင့် ကျောင်းသား ပြည်သူများကို စစ်သား၊ ရဲ၊ ကြံ့ဖွံ့နှင့် စွမ်းအားရှင်များက မျက်ရည်ယိုဗုံးများ သုံးကာ အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက် ဖြိုခွဲခဲ့ကြပြီး ရာနှင့်ချီသော ရဟန်းရှင်လူတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းအကြမ်းဖက်မှုတွင် ကျဆုံးခဲ့သည့် ရဟန်းရှင်လူစာရင်းကို မရရှိသေးပေ။
ယမန်နေ့မှစ၍ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားနှင့် ဆူးလေဘုရားပတ်ဝန်းကျင်တွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တင်းကျပ်စွာ ချထားပြီး ကြံ့ဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင်များကိုလည်း တွေ့နေရသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ သာမန်ပြည်သူတချို့ကလည်း ရဟန်းရှင်လူများကျဆုံးသည့် တလပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကျွေးပွဲများကို ပြုလုပ်ကြောင်းသိရသည်။
ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းတွင်နေထိုင်သည့် တလပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကပ်သူတဦးက “အမြဲပင့်နေကျ ဘုန်းကြီး ၃ ပါးကို အိမ်မှာပင့်ပြီး ဆွမ်းကပ်တယ်။ လွန်ခဲ့သောတလက ဆုံးပါးသွားတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ ရဟန်း သံဃာတွေအတွက် အမျှဝေတာပါ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အချိန် - 9:06 AM
Pyae Sone | 9:05 AM | News
မကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့သူတို့ပျော်ပါးနေကြောင်းကိုဝန်ခံဖေါ်ပြထားပြီးတော့ တိုင်းပြည်ထဲ ကို ရောဂါဆိုးတွေ သယ်လာသူတွေဟာ သူတို့ ဘဲဖြစ်ကြောင်း။
သန်းရွှေရဲ့သားမက် တေဇရဲ့သား ထက်တေဇရေးလာသောအီးမေးဖြစ်ပါသည်။
From: htat tayza <mr.htattayza@gmail.com>
Date: Oct 25,2007 2:56 PM
Subjest: US ban us ? So what?
US bans us? lol We're still fucking cool in singapore. See my photos? We're sitting on the whole burmese GDP. We've got timber, gems, gas to be sold out other countries like singapore, china, india and russia. Last month, people took out to the streets for protest against little fuel price hike, you know what, that's silly stuff to me. I used to fly back onceaweek, and my bro is rocking on his red brand new Lamborghini Gallardo with hot sexy western chicks. Come on, fly with Bagan. It's cheaper than others, right? 1S$ makesalot differences in burmese currency. And I need another Ferrari to rock on :P
အချိန် - 9:05 AM
Pyae Sone | 9:31 AM | News
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဘာအမိန့်အာဏာမှမရှိတဲ့ အောင်ကြည် ဒီကနေ့ညနေတွေ့ဆုံ
Daw Aung San Suu Kyi met today with Aung Kyi
Source; Ko Htut.
အချိန် - 9:31 AM
Pyae Sone | 7:13 AM | ဗေဒင်
အဲဒီမှာ ထူးခြားတာ ထပ်ပြောပါဦးမယ်။ နိုင်ငံအနှံ့ မှာ သံဃာတွေ ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ ညောင်တုန်း၊ အမရပူရ၊ မြင်းခြံ နဲ့ ပခုက္ကူ ဆိုတဲ့ မြို့တွေမှာ သံဃာတော် အရေအတွက် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲမှာ (ပခုက္ကူမြို့) မှာမှ ဘာဖြစ်လို့ စဖြစ်လိုက်တာလဲ။
ယနေ့အချိန်အခါမှာ ဖြစ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ အခြင်းအရာတွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရင်း မည်သည့် နည်းလမ်း၊ နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်၍ အချိန်တိုအတွင်း၊ မည်သို့မည်ပုံနဲ့ပန်းတိုင်စိုက်ထူမဲ့ ရက်ချိန်းကို သတ်မှတ်ကြရန် အချိန်ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည် ။
ယေဘုယျအားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည် ဆိုပါက ယခုအချိန်သည် (၈) လေးလုံး မတိုင်မီ မောင်ဖုန်းမော် သေဆုံးပြီး အချိန်ကာလနှင့် အတော် တူနေပါသည်။ မောင်ဖုန်းမော် အသတ်ခံရပြီးချိန်က စပြီး ဟိုနေရာ နည်းနည်း ဒီနေရာ နည်းနည်းနဲ့ ပျောက်ကျားဆန်ဆန် စီကနဲ ကျွက်ကနဲ လှုပ်ရှားကြရင်း (၈) လေးလုံး ရက်ကို တီးတိုးတမျိုး ကျယ်ကျယ်တဖုံ သတ်မှတ်လိုက်ကြကာ (၈-၈-၈၈) ရောက်မဲ့နေ့ကို ရင်တဖိုဖိုနဲ့မောင်းတင်ပြီး စောင့်နေခဲ့ကြတာ ပြည်သူအားလုံး အသိပါပဲ။တကယ့် ရက်ရောက်လို့တကယ်ပဲ ချကြပြီဆိုတော့ ပြည်သူတွေ အကုန်လုံး လမ်းပေါ် ထွက်လာခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒါ ကြောင့်လည်းပဲ မဆလနဲ့ နောက်ပါ အစိုးရ အဆက်ဆက် ရက်နဲနဲစီပဲ ကွာပြီး တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ပြုတ်ကျသွားတာ ယနေ့ထိ မမေ့နိုင်သေးပါဘူး။ အဲဒါ တတိုင်းပြည်လုံး တချိန်တည်း တပြိုင်တည်း ထွက်လာကြလို့နော်။
အခုလည်း မောင်ဖုန်းေးမာ် အသတ်ခံရတာထက် အဆမတန် ရင်နာစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ၊ မြန်မာ ပြည်သူများ သာမက ကမ္ဘာ့ ပြည်သူ အပေါင်းတို့ကပါ အော့နှလုံးနာပြီး နာကျည်း ခံပြင်းချက်တွေနဲ့အတူ ဆန့်ကျင်နေကြပါပြီ ။ ကျနော်တို့ အချိန်မဆွဲဘဲ သွေးမအေးစေဘဲ ခပ်သွက်သွက် ခပ်မြန်မြန် အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
စစ်အစိုးရရဲ့အချိ်န်ဆွဲ နည်းဗျူဟာကို အားလုံးက သိပြီးသားမို့သူတို့ဘာပြောပြော ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ယူဂျီတွေ၊ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ပြည်လုံးကျွတ် တော်လှန်ရေး အတွက် နည်းဗျူဟာတွေ၊ မဟာဗျူဟာတွေ ချမှတ်ထားပြီး နေ-ကြပြီ ဆိုတာလည်းယုံ ကြည် မိပါသည် ။ သူတို့လိုပါပဲ ပါးစပ်ကလဲ ပြောပေး၊ တဖက်ကလည်း အစီအစဉ်တွေ ချမှတ်ထားရမှာပါ။ အစီအစဉ် ချမှတ်လို့သေချာပြီ ဆိုရင် ပါးစပ်ပြောထဲမှာ ရက်ချိန်းကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ပြောနေ လို့ကတော့ မောင်ပြောပဲ ဖြစ်ပြီး မောရုံရှိမှာပါ။
အဲဒီအကြောင်းကို စပြီး သတိပြုမိတာက နအဖတို့ အတင်း အဓမ္မ ကြက်ဆူပင် စိုက်ခိုင်းတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေက ဒါဟာသက်သက် (စုကြည် ကို ကြက်ဆူ) နဲ့ ကက်ကင်း ယတြာ လုပ်တာဘဲလို့ သဘောပေါက်ပြီး တန်ပြန်ကက်ကင်း ဓါတ်အဖြစ်နဲ့(ကြက်ဆူစိုက်- ဇီးကွက်ဆောင်) ဆိုပြီး ဇီးကွက် ရုပ်ကလေးတွေ ရင်ဘတ်မှာ ချိန်ဆွဲခဲ့ကြတာ မှတ်မိမှာပါ။ အဲဒီကတည်းက (ကြက်ဆူစိုက် နဲ့ ဇီးကွက်ဆောင်တို့) ရဲ့ (၈) ဂဏန်းတွေကို လှစ်ကနဲ သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။
(အစိုးရ) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဝင် လူတွေဟာ ငါတို့ဟာ(ပြည်သူလူထု) ထဲက တဦး ဖြစ်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ရိုးသားစွာ ခံယူနိုင်မှလည်း (ပြည်သူလူထု)နဲ့ တသားတည်း ဖြစ်ပြီး (ပြည်သူလူထု)နဲ့(အစိုးရ) ချိန်ခွင်လျှာ မျှနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ပြည်သူလူထု) နဲ့ (အစိုးရ) တို့အင်အား မျှနေတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ (အာဏာ) ဆိုတာ ခိုင်မြဲ တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး တိုင်းပြည်မှာလည်း အေးချမ်းသာယာ ဝပြောလျက် ရှိကြတာကို တွေ့ ကြရမှာပါ။ ဆိုလိုချင်တာက (၈) ဂဏန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံတည်းနဲ့သာ သက်ဆိုင်တာ မဟုတ်ကြောင်းပြောပြချင်တာပါ။
အချိန် - 7:13 AM
ကော့ကရိတ်အနီး ခရီးသည်တင်ကားမှောက် ခရီးသည်အများအပြား သေဆုံးဒဏ်ရာရ
Pyae Sone | 6:48 AM | သတင်း
မနေ့က မြ၀တီမှ မော်လမြိုင်သို့ ထွက်ခွါသွားသည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်တစီးသည် ကော့ကရ်ိတ်မြို့နယ်အတွင်းတွင် တိမ်းမှောက်ကာ လမ်းအောက်သို့ ထိုးကျသွားစဉ် ခရီးသည် အများအပြား သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ယမန်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီတွင် မော်လမြိုင်သို့ ပြေးဆွဲနေသည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှာ ကော့ကရိတ်ပိုင် ၀ါးစခန်းအနီး တိမ်းမှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကားက မြ၀တီက အောင်ရတနာအေး ကားလိုင်းကပါ။ ခရီးသည် ၉ ဦးသေတယ်ကြားတယ်။ အားလုံး ၃၁ ယောက် တင်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်”ဟု မြ၀တီမြို့ခံတဦးက ဆိုသည်။
ဒဏ်ရာရသူများကို ကော့ကရိတ်ဆေးရုံတွင် ကုသနေရပြီး အများအပြားမှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန် သည်ဟု ဆိုသည်။
“ကားချင်းကျော်တက်ပြီး လမ်းဘေးမြေပြိုတော့ ကားတစီးလုံး လမ်းအောက်ဘက်ကို ထိုးကျ သွားတာပဲ။ ခရီးသည် ၉ ဦး သေတယ်။ မနေ့က (၂၄) ရက်နေ့၊ မနက် (၁၀) နာရီမှာပေါ့၊ ကော့ကရိတ်အပိုင် ၀ါးစခန်းနေရာမှာ။ ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတော့ ကော့ကရိတ်ဆေးရုံကို ဆက်ပို့လိုက်တယ်။ ကားကတော့ အောင်ရတနာကားပဲ”ဟု မြ၀တီမှ အမည်မဖော်လိုသည့် အစိုးရဝန်ထမ်းတဦးက ဆိုသည်။
သေဆုံးသူများထဲတွင် ကလေးငယ်မိခင်အပါအ၀င် အမျိုသမီး ၆ ဦးနှင့် အမျိုးသား ၃ ဦး ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံရဲဝန်ထမ်းတဦးက အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
အဆိုပါကားသည် မြ၀တီမှ မော်လမြိုင်မြို့သို့ ဘုရားဖူးထွက်ခွါခဲ့သည့် ကားဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံ များက ပြောကြားခဲ့သည်။
မဲဆောက်ဈေးမှ ကုန်သည်တဦးက “ဈေးထဲမှာ ကုန်ခြောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး ငွေလဲတဲ့ မနုမိသား စု ပါသွားသလားမသိဘူး၊ သူတို့ဘုရားဖူးသွားကြတာ၊ ဒီနေ့တောင် ဆိုင်ပိတ်ထားတယ်၊ မနက်က သူ့အမျိုးတွေလိုက်သွားတော့ လမ်းမှာ ထိုင်းရဲက ဖမ်းမိသွားသေးတယ်”ဟု ဆိုသည်။
ကလေးငယ်တဦးကို ရင်ခွင်တွင်ပိုက်ရက်ဖြင့် မိခင်တဦးသေဆုံးနေသည်ကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့မြင်ရပြီး ဒဏ်ရာရသူ စုစုပေါင်းမှာ ၁၁ ဦး ဖြစ်သည်ဟု မျက်မြင်သက်သေတဦးက ဆိုသည်။
အချိန် - 6:48 AM
Pyae Sone | 6:00 AM | သတင်း
မကြာမီက သေဆုံးသွားသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းနေရာတွင် အတွင်းရေးမှူး (၁) ဖြစ်သူ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်စိန်အား ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ကြောင်း စစ်အစိုးရကအမိန့်ကြေညာချက်ကို ယမန်နေ့ကထုတ် ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ် ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ခန့် ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါရှိခြင်းမရှိချေ။
ကာလရှည်ကြာစွာ ခေတ္တဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူနေရာမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးကာ အမိန့် အမှတ် (၃/၂၀၀၇) ဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးကို ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒု-ဗိုိလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်သည် ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် (ဒီအက်စ်အေ) အပတ်စဉ် (၉) ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီး ရွှေတြိဂံတိုင်းမှူး၊ စစ်ရေးချုပ်၊ အတွင်းရေးမှူး (၂)၊ အတွင်းရေးမှူး (၁)
နှင့် အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်အစိုးရအာဏာ သိမ်းပြီး နောက်ဖြစ်လာသည့် (၅) ယောက်မြောက် ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။
အမိန့်အမှတ် (၄/၂၀၀၇) ဖြင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးကို ယခု ဒု- ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်နေရာ၌ အတွင်းရေးမှူး (၁) အဖြစ်လည်း ယမန်နေ့က စစ်အစိုးရက ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စစ်အစိုးရအကြား အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ခန့်အပ်ခဲ့ သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြည်အောင်အား ဦးကြည်အောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ်လည်း ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ထောက်ချုပ်တာဝန်မှ ယခုကဲ့သို့ အတွင်းရေးမှူး (၁) နေရာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ယမန်နေ့က နေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်သည့် ကုလသမဂ္ဂနှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် စတင် မိန့်ခွန်းပြောဆိုနေသည် ကို မြ၀တီရုပ်သံတွင် ထုတ်လွှင့် သွားသည်။
ထို့အပြင် စစ်အစိုးရက ယမန်နေ့က ဗိုလ်ချုပ်သုံးဦးအားလည်း ဒုဝန်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ သည်။၎င်းတို့မှာ ကာကွယ်ရေး၊ အမှတ် (၂) စက်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနများအတွက် ဒု-၀န်ကြီးများအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွာခိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုပ် သိန်းထွန်းတိုိ့ကို ယမန်နေ့က ခန့်အပ်လိုက်သည်။
ပုံမှန်အရ လေးလပတ်အစည်းအဝေးတွင်သာ စစ်ရာထူးများ အပြောင်းအလဲကို ပြုလုပ် သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း မကျန်းမမာဖြစ်စဉ်ကတည်းက ယခုလက်ရှိနေရာများကို ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်အလုပ်သမားဝန်ကြီးအားပြောင်း ရွှေ့သတင်းမပါလာသဖြင့် ဖြုတ်လိုက်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
အချိန် - 6:00 AM
(၁၂)နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းခံနေရသည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ကမ္ဘာ့မြို့ကြီး (၁၂) မြို့မှာ ဆန္ဒပြပွဲများကျင်းပ
Pyae Sone | 11:26 AM | News
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းဟာ ဒီကနေ့မှာ(၁၂)နှစ် ပြည့်မြောက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် (၁၈)နှစ် ကျော်ကာလအတွင်း ၁၉၈၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်မှ ၁၉၉၅ ခု ဇူလိုင်အထိ တကြိမ်၊ ၂၀၀၀ ခု စက်တင်ဘာမှ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မေလအထိ တကြိမ်၊ ၂၀၀၃မေလမှ ယခုအချိန်တိုင်အောင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် စုစုပေါင်း (၁၂) နှစ်ကြာအောင် ထိန်း သိမ်းခံနေရသည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ မြန်မာ့အရေး လူပ်ရှားသူများဟာ ဒီကနေ့မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရသံရုံးနဲ့ တရုတ်သံရုံးများရှေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ဆန္ဒပြပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့သလို Bangkok, London, Paris, Berlin, Dublin, Vienna, Sydney, Washington, Toronto, New York, Brasilia, Cape Town စတဲ့ ကမ္ဘာ့မြို့ကြီး (၁၂) မြို့မှာ ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြပွဲများ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန် - 11:26 AM
သြစတြေးလျက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုပြုလုပ်
Pyae Sone | 9:18 AM | သတင်း
ပြီးခဲ့သည့်လက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆန္ဒပြသူများကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့မှုအတွက် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များကို သြစတြေးလျနိုင်ငံက ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုပြုလုပ်လိုက်ကြောင်း ယနေ့ ကြေညာသည်။
ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခံရသူများအနက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအပါအ၀င် စစ်ဗိုလ်ချုပ်အသိုင်း
အ၀ိုင်းမှ (၄၁၈) ဦးပါဝင်သည်ဟု သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အလက်ဇန္ဒားဒေါင်နာ
၎င်းက “စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ဖို့ရယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကို နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီ လူ့အခွင့်ရေး
တွေပေးဖိုို့ သြစတြေးလျက မြန်မာ စစ်အစိုးရကို အစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံက မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုများ
နှင့် စစ်ပစ္စည်းများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်ပို့မှုတားမြစ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ရာ ယခုထပ်မံ ပိတ်ဆို့မှုများသည် မြန်စစ်အစိုးရအပေါ် ပိုမိုဖိအားပေးရာရောက်စေသည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု၌ မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များနှင့် ၎င်းတို့အားထောက်ခံသူတို့၏ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုနှင့် ငွေပေးငွေယူကိစ္စများကို သြစတြေးလျဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်
ယခုအရေးယူမှုသည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုမဟုတ်သော်လည်း သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ လက်ရှိတည်ဆဲ ဥပဒေအရ နိုင်ငံတနိုင်ငံကို အပြင်းထန်ဆုံး ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာအရေးယူမှု ဖြစ်သည်။
အချိန် - 9:18 AM
Pyae Sone | 5:43 AM | News
ဦးမောင်မောင်ဦးတို့ ဇနီးမောင်နှံက ယခုလ (၁၆) ရက်၊ ပေါင်းတည်မြို့၌ ပြုလုပ်သည့် စစ်အစိုးရ ထောက်ခံပွဲတက်သူတို့အား “တကယ်ပဲ ရဟန်းသံဃာနဲ့ပြည်သူကိုသတ်နေတဲ့အစိုးရကို ထောက် ခံသလား”ဟု နေအိမ်မှလှမ်း၍ မေးခွန်းထုတ်ခြင်းနှင့် “ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများအား နှိပ်စက်
ညှဉ်းပန်း သတ်ဖြတ်နေသူများအား ရှုတ်ချကြ” ဆိုသည့် စာသားကို ၀ှိုက်ဘုတ်ပေါ်၌ရေး၍ ချိတ်ဆွဲခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်သည်။
သံဃာတော်များဘက်မှရပ်တည်ကာ မိမိဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ပြသမိသဖြင့် ဖမ်းဆီးခံနေရသည့်
ပဲခူးတိုင်း ပေါင်းတည်မြို့မှ မူလတန်းပြ ဆရာဟောင်း ဦးမောင်မောင်ဦးနှင့် ဒေါ်နီနီမာတို့ ဇနီးမောင်နှံကို အာဏာပိုင်များက အာမခံဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးအား လွှတ်ပေးရန် ပေါင်းတည်မြို့မှ သြဇာတိက္ကမ ရှိသည့် ဘုန်းတော်ကြီး
(၃) ပါးက အာဏာပိုင်များကို သွားရောက်မိန့်ကြားခဲ့သည့်အတွက် ပြီးခဲ့သည် စနေနေ့
နံနက်၌ ပေါင်းတည်ထောင်မှ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖမ်းဆီးခံရသူတို့၏ ဆွေမျိုးနီးစပ်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “သံဃာတော်တွေဘက်ကနေ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ သူတို့လင်မယားကို ဖမ်းထားတာ ကန့်ကွက်ပါတယ်ဆိုပြီး ဆရာတော်တွေက အာဏာပိုင်တွေကို သွားပြောတဲ့အတွက် သူတို့ကို အာမခံနဲ့ အိမ်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်၊ အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့အဖေက လိုက်သွားပြီး အာမခံလိုက် ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
၎င်းတို့အား ပြန်လွှတ်လိုက်သော်လည်း ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) အရ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ထိခိုက်စေ သည့်ပြစ်မှု၊ ပုဒ်မ (၁၅၃) အရ ရန်စသည့်ပြစ်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားခြင်းကိုမူ အာဏာပိုင်များ
က ပြန်မရုပ်သိမ်းသေးဘဲ လာမည့် (၃၀) ရက်၌ အမှုရင်ဆိုင်ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“အမကတော့ ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဖြစ်တဲ့အမှုကို ဥပဒေအတိုင်း သူရင်ဆိုင်သွားမယ်တဲ့။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုကို မှန်တယ်လို့ သူအခုလည်း ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်၊ နောင်တမရဘူးလို့ ပြောပါတယ်” ဟု ဒေါ်နီနီမာ၏ပြောကြားချက်ကို ၎င်း၏ဆွေမျိုးဖြစ်သူက ပြန်လည်ရှင်းပြသည်။
အသက် (၄၀) ကျော်အရွယ်ရှိ ဦးမောင်မောင်ဦးနှင့် ဒေါ်နီနီမာတို့သည် ပေါင်းတည်မြို့၌ မူလတန်းပြဆရာများ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး လက်ရှိတွင် ဆန်စပါးအရောင်း
အချိန် - 5:43 AM
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ လူငယ်တပ်ပေါင်းစုနှစ်ခု အစည်းအဝေးမှ စစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံကို သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား
Pyae Sone | 12:25 AM | News
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် (၂) ရက်ကြာကျင်းပ ပြုလုပ်သော လူငယ်တပ်ပေါင်းစု နှစ်ခု၏ အစည်း အဝေး မနေ့ညနေက ပြီးဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား လူငယ်များကွန်ဂရက် Students and Youth Congress of Burma နှင့် တိုင်းရင်းသား လူငယ်များဆုံရပ် Nationalities Youth Forum လူငယ်တပ်ပေါင်းစု များမှ ကိုယ်စားလှယ် (၂၀) ကျော်ခန့် တက်ရောက်သော အစည်းအဝေးမှ နိုင်ငံရေး လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ရှေ့လုပ်ငန်း စဉ်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စတို့ကို အဓိကဆွေးနွေး၍ ကိုယ်စားလှယ် (၈) ဦးပါသော ဦးဆောင်ကော်မတီ တစ်ရခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။ အစည်းအဝေးမှ..
(က) စစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံကို အသက်မရှိတော့ကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်၊
(ခ) စစ်အစိုးရမှ ဖွဲ့စည်းလိုက်သော အဖွဲ့ဝင် (၅၄) ဦးပါ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းမှာ စစ်အစိုးရမှ ချမှတ်ခဲ့သော အမိန့်အမှတ် (၁/၉၀) ကို ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ ချထားသော အမိန့်ဥပဒေများ ကိုပင် ပြန်လည် ချိုးဖောက်သော စစ်အစိုးရကို မည်သို့မှ ယုံကြည်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်၊
(ဂ) ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် (၁၅) နိုင်ငံ၏ တခဲနက် ထောက်ခံမူဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော လုံခြုံရေး ကောင်စီဥက္ကဌ၏ ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက် ကို ထောက်ခံ ပြီး၊ ယင်းညွှန်ကြားချက် အတိုင်းသာ မြန်မာပြည် အသွင်ကူး ပြောင်းရေးကို တက်လှမ်း ရမည်…ဟူသော ဆုံးဖြတ်ချက် သဘော ထားများ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ထို့ပြင် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းများကို တပြိုင်တည်း အရှိန်အဟုန်နှင့် လုပ်ဆောင် သွားရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားလူငယ်များ ကွန်ဂရက်သည် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူငယ်အဖွဲ့ (၁၆) ဖွဲ့နှင့် ဖွဲ့စည်း ထားသော လူငယ် တပ်ပေါင်းစုဖြစ်၍၊ တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ ဆုံရပ်သည် တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ လူငယ် အဖွဲ့အစည်း (၁၂) ဖွဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်း ထားသည်။ တပ်ပေါင်းစု နှစ်ခု စလုံး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်နှင့် အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ် တို့တွင် အခြေစိုက် လူပ်ရှားသည်။
အချိန် - 12:25 AM
Pyae Sone | 3:09 AM | Photos | သတင်း
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မယ်တော်ဆေးခန်းမှမိသားစုဝင်များနှင့် မယ်တော် Children Development Center စာသင်ကျောင်းမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများက မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပွဲကိုယနေ့ မနက် ၈း၃၀ နာရီမှ ၁၁း၀၀ နာရီအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း အခမ်းအနားသို့ လူတစ်ထောင်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၊ တက်ရောက်သူများအားလုံးက အနီရောင်အင်္ကျီများဝတ်ဆင်ထားကြပြီး၊ အနီရောင်အင်္ကျီပေါ်တွင်“ လူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ခြင်းကင်းရှင်းကြစေ၊ ဒို့မေတ္တာစွမ်းကမ္ဘာလွှမ်းအေးချမ်းကြစေ ” မေတ္တာပို့စာပိုဒ် အား အင်္ဂလိပ်၊ ထိုင်း၊ မြန်မာသုံးဘာသာဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်မှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလမ် (မူစလင်)ဘာသာများဖြင့် ဘာသာအလိုက် အသီးသီးမေတ္တာပို့ဆု တောင်းကြခြင်း၊ မယ်တော်ကျေးရွာထိုင် ရွာသူကြီးမှ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်း၊ အခမ်းအနားတွင် တက်ရောက်လာကြသူအားလုံးမှဖရောင်းတိုင်မီးများထွန်းညှိပြီးမေတ္တာပို့ စာပိုဒ်ကိုသံပြိုင်ရွတ်ဆိုကာ ဆုတောင်းခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအပတ်ပြုလုပ်သည့်ဆုတောင်းပွဲအပါအ၀င် ဆုတောင်းပွဲများကို မယ်တော်ဆေးခန်းမှ အပတ်စဉ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာ လေးကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပြီး၊ ယခုအပတ်တွင်ပြုလုပ်သည့် ဆုတောင်းပွဲ တွင်ထူးခြားသည် မှာစက်တင်ဘာလအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်း ကျဆုံးပြန် လွန်တော် မူသွားကြသော ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားပြည်သူများအား လေးစားသောအားဖြင့် ဦးညွှတ်ဂုဏ် ပြုသည့် အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီရေး အတွက်ရည်စူး၍ လည်းကောင်း၊ သစ်ပင်ပန်းပင် များစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ထိုသစ်ပင်များတွင်လည်း အနီရောင်ဖဲပြားလေးများချီနှောင်၍ ဂုဏ်ပြုဦးညွှတ်ခြင်း၊ သစ္စာပြုခြင်း များကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
အချိန် - 3:09 AM
Pyae Sone | 1:02 AM | News
20 Oct 07, 23:23
ကဒေါင်းညင်သာ: ဗကသခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကိုက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်က အဖမ်းခံရပြီးသွားပြီ။ ဒီစီဘောက်က သတင်းမှားတွေ လွှင့်နေသလို ခံစားနေရတယ်။
ကိုကဒေါင်းညင်သာ သို့ သိရှိစေရန်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တင်သော သတင်းများ သည် သေချာမှသာတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ရူသော သူများေ၀၀ါးစေရန် အမြင်များ တွေဝေ စေမှုများ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ အခုလို ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ပေး တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ။ နောက်လည်း ဆက်လက်ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါသတင်းများကို ဖတ်ရှုစေချင်ပါတယ်။ ကိုကျော်ကိုကို၏ မိခင်နှင့် သူ၏အားဖမ်းဆီးသွားသော သတင်းသည် အသံဖိုင်သာရှိသည့်အတွက် မတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Activists send female underwear to Burmese embassies.
Pyae Sone | 9:40 AM | News | သတင်း
I want you to see this website.
`မြန်မာသံရုံးတွေကို မိန်းခလေး အတွင်းခံပေးပို့သော ကန်ဘိန်းဖြစ်ပါသည်။အကောင်းဆုံး သော ပထမဆုံးသော ကန်ဘိန်းဖြစ်ပါသည်။ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်……http://beautifultobehold.wordpress.com/2007/10/20/if-monks-compassion-cannot-perhaps-ladies-panties-can/
အချိန် - 9:40 AM